..: Butter Beans - Myanmar Pulses, Beans & Sesame Seeds Merchants Association :..
Butter Bean or Phaseolus lunatus
Binomial name of Butter bean is Phaseolus lunatus. It is commonly known as the lima bean or butter bean; it is also known as Haba bean, Pallar bean, Burma bean, Guffin bean, Hibbert bean, Sieva bean, Rangoon bean, Madagascar bean, Paiga, Paigya, prolific bean, civet bean, sugar bean or đậu ngự (Vietnamese).
By 1301, cultivation had spread to North America, and in the sixteenth century the plant arrived and began to be cultivated in the Eastern Hemisphere.The small-seeded wild form (Sieva type) is found distributed from Mexico to Argentina, while the large-seeded wild form (Lima type) is found distributed in the north of Peru.In the Southern United States, lima beans and butter beans are seen as two distinct types of beans.
These beans are white, of almost uniform size and flat oval shaped. They are soft, tender and tasting. Because of their sweetness it is essential that they be protected from infestation. By boiling they are converted into paste or jelly for cakes or cookies, and also used for soups or curries. It is also one of the ingredients used in the manufacture of vermicelli.
ထောပတ်ပဲ၏ Binomial အမည်မှာ Phaseolus lunatus ဖြစ်ပြီး အများသုံးအမည်များမှာ Lima bean (သို့) Butter bean တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထောပတ်ပဲကို ၁၃ဝ၁ ခုနှစ် မြောက်အမေရိက တွင် ပြန့်နှံ့စိုက်ပျိုးလာကြပြီး ၁၆ ရာစုခန့်တွင် ကမ္ဘာ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စတင်စိုက်ပျိုးလာကြောင်း သိရပါသည်။။ ထောပတ်ပဲအသေးကို မက္ကစီကိုနှင့် အာဂျင်တီးနား တို့မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးပြီး ပဲအကြီးကို ပီရူးမြောက်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးကြောင်းသိရပါသည်။
ထောပတ်ပဲတွင် သွေးပုံမှန်လည်ပတ်စေပြီး ကိုလက်စထရောနည်းသည့် ပျော်ဝင်နိုင်သည့် အမျှင်ဓါတ်အပြင် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အစာမကျေခြင်း၊ အူမကင်ဆာဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင် သည့် ပျော်ဝင်ခြင်း မရှိသည့် အမျှင်ဓါတ် ဟူ၍ နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ကြောင်း သိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောပတ်ပဲကို ဆောင်းရာသီတွင်သာ စိုက်ပျိုးပြီး စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း (အရှေ့နှင့်အနောက်)၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတို့မှာ စိုက်ပျိုးပါသည်။ စိုက်ပျိုးသည့် ဒေသများအားလုံးအနက် မကွေးတိုင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ထောပတ်ပဲမှာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကြောင့် အများဆုံးဝယ်ယူသည့် ဂျပန် ဝယ်လက်များမှ ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း သိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်စဉ် ထောပတ်ပဲ တန်ချိန် --- ဝန်းကျင် ထုတ်လုပ်မှုရှိကြောင်း သိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောပတ်ပဲထွက်ရှိမှု၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ နှင့် ယူအေအီးနိုင်ငံများကို ပင်လယ်ရေကြောင်း(သို့) နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှ တင်ပို့မှုရှိပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂ဝဝ၆-ဝ၇ တွင် တန်ချိန် ၁၅ဝဝ ကျော်၊ ၂ဝဝ၇-ဝ၈ တွင် တန်ချိန် ၁၇ဝဝဝ ကျော်၊ ၂ဝဝ၈-ဝ၉ တွင် တန်ချိန် ၁၆ဝဝဝ ကျော်၊ ၂ဝဝ၉-၁ဝ တွင် တန်ချိန် ၁၂ဝဝဝ ခန့်နှင့် ၂ဝ၁ဝ-၁၁ (နိုဝင်ဘာလအထိ) တန်ချိန် ၉ဝဝဝ နီးပါး တင်ပို့မှုရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ထောပတ်ပဲ၏အမည်များကို အောက်ပါအတိုင်း ခေါ်ဝေါ်ကြောင်းသိရပါသည်။
- ထောပတ်ပဲ၊ မြီးတောက်ပဲ၊ ပဲထောပတ်
- BUTTER BEAN, LIMA BEAN
(ဃ) ရုက္ခဗေဒအမည် - PHASEOLUS LUNATUS LINN
ထောပတ်ပဲ၏ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်အပြားဖြစ်ပြီး၊ အရောင်ဖြူ၍ထုပါးပါသည်။ ထောပတ်ပဲ၏ပျှမ်းမျှအရွယ်အစားမှာ အလျား (၁ဝ) မီတာမှ (၁၈) မီလီမီတာ၊ အနံ (၆) မီလီမီတာမှ (၁၂) မီလီမီတာအထိရှိပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းမှထောပတ်ပဲကို တိုင်းတာ လေ့လာ ရာတွင် ပျမ်းမျှအလျား ၁၅.၅ x အနံ ၁၂.ဝ နှင့် ထု ၃.၉ မီလီမီတာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ ထောပတ်ပဲတစ်စေ့၏ ပျမ်းမျှ အလေးချိန်ကို လေ့လာချိန်တွယ်ရာတွင် ၈.၅၁ ဂရမ် ခန့်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပဲအမျိုးအစားများတွင် ထောပတ်ပဲသည် လုံးကြီးအုပ်စုတွင် ပါဝင် ပါသည်။ အချို့ထောပတ်ပဲ၏ အရောင်အဆင်းမှာ အဖြူတွင် နို့နှစ်ရောင်သမ်းမှု တွေ့ရပါသည်။ ထောပတ်ပဲတွင် အချို့အနီ၊ ခရမ်း၊ အညို၊ အနက်များရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ထောပတ်ပဲအသီး၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ပဲလိပ်ပြာ၊ ပဲပုဇွန်တို့နှင့် ဆင်တူလျက် ယင်းပဲသီး များထက် အနည်းငယ်သေးပါသည်။ အလျား (၂.၅) လက်မမှ (၃) လက်မခန့်ရှိ၍ အနံမှာ (ဝ.၅) လက်မ ခန့်ရှိပါသည်။ အသီးနုစဉ်အစိမ်းနုရောင်ရှိပြီး ရင့်မှည့်လာသောအခါ ဝါဖန့်ဖန့် အရောင်သို့ ပြောင်းလာပါသည်။ အသီးတစ်တောင့်လျင် သီးတောင့် ၂၅ မှ ၅ဝ အတွင်း ပါတတ်ပါသည်။
ထောပတ်ပဲတွင်ပါဝင်သော အဟာရဓါတ် ရာခိုင်နှုန်းတို့မှာ ဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်း အဖွဲ့၏ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်အရ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
အဆီဓါတ် (Fat %)
အမျှင်ဓါတ် (Fibre %) 5.03 %
(၆) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် (Carbo Hydrate %) 55.75 %
ထောပတ်ပဲ၏မူရင်းဒေသမှာ ကမ္ဘာသစ်မှဖြစ်ကြောင်း၊ မက်ကိ (MACKIE-1943)၏ အဆိုအရ ထောပတ်ပဲ၏မူရင်းဒေသမှာ ဂွါတီမာလာမှဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မကြာမီမှ ရရှိသော အထောက်အထားများအရ ယင်းပဲအရွယ်အသေးများ၏ မူလဒေသမှာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ပစ္စဖိတ်ကမ်းတောင်ခြေမှဖြစ်ကြောင်း၊ ပဲအရွယ်အကြီးများ၏မူလဒေသမှာ ဗီရှုးနိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြောင်း အချို့သုတေသီများမှ ဖော်ပြကြပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ မူရင်းဒေသနှစ်ခုမှ အပူပိုင်းဒေသများသို့ ပျံ့နှံ့လာကြောင်း၊ ယခုအခါ အမေရိကန်အလယ်ပိုင်း၊ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့တွင်တွေ့ရကြောင်း၊ ထောပတ်ပဲကို စပိန်သင်္ဘောသား များက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သယ်ယူဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် အာရှတိုက်သို့ ပျံ့နှံ့ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အခြားဆောင်းသီးနှံများနည်းတူ အစိုဓါတ်ဖြင့်ပင် စိုက်ပျိုးအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ မြေအမြင့်ပိုင်းဒေသများ၌ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မိုးအသင့်အတင့်ရွာသွန်းပါက ထောပတ်ပဲအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ ပါသည်။ သီးလုံးတည်ပြီးနောက်ပိုင်း၌ မိုးရေကိုမလိုတော့ဘဲ မြေအစိုဓါတ် နှင့်ပင် ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထောပတ်ပဲကိုအပူပိုင်းဒေသ မိုးရေချိန်လက်မ ၃၆ နှင့် ၆ဝ လက်မကြား ရွာသွန်း သည့်နေရာများ၌ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးရေချိန်လက်မ ၃၅ အောက်ရွာသည့် မလှိုင်မြို့နယ်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးကြောင်းသိရပါသည်။
ထောပတ်ပဲကို မြေပြန့်ဒေသများ၌ သြဂုတ်နှင့်စက်တင်ဘာလများတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ်တွင်မူ အောက်တိုဘာလခန့်မှစ၍ စိုက်ပျိုးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထောပတ်ပဲ၏ သက်တမ်းမှာ (၁၂ဝ) ရက်ခန့်ရှိပါသည်။
ထောပတ်ပဲကို မြေပြန့်ဒေသများတွင် ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလတို့တွင် ရိတ်သိမ်း ကြ၍ ဂန့်ဂေါကဲ့သို့ တောင်ပေါ်ဒေသများတွင်မူ မတ်လခန့်တွင်ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ထောပတ်ပဲ သီးများ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် ဝါခြောက်လာပါက ရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထောပတ်ပဲကို ပြုတ်၍လည်းကောင်း၊ ပဲကြမ်းကြော်ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း၊ ပဲရေပွ ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း စားသုံးကြပါသည်။ ပဲမှုန့်ပြုလုပ်၍လည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဟင်းလျာ အဖြစ် ထောပတ်ပဲ ကို အသုံးပြုနည်းပါးသည်။ တောင်သူများအနေဖြင့်အိမ်တွင်စားသုံးရန် ၁ တင်း မှ ၂ တင်းခန့်သာချန် ထားလေ့ရှိပါသည်။